image downloaded from photobucket.com
မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့တစ်နှစ်သာလိုတော့တာမို့ ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာ သုတေသနကိုအပြီးသတ်ပြီး ကုသရေးနဲ့သင်ကြားရေးဖက်ကို ပိုပြီးလေ့လာဖို့ အချိန်ရောက်လာခဲ့ပြီလေ။ ကိုယ့်မိခင်တက္ကသိုလ်မှာပြန်ပြီး သင်ကြားဖြန့်ဝေနိုင်အောင် စာတွေစုရင်းပိုဖတ်ရတော့မှာမို့
ဘလော့ဂ်လောကကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လို့ အချိန်ပိုလေးရခဲ့ရင်တော့ ပြန်ရေးကောင်းရေးပါဦးမယ်။
အခုအချိန်အထိလာရောက်အားပေးဖတ်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများ၊ လင့်ခ်ချိတ်ထားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများ၊ကော်မဲန့်လေးတွေရေးပေးလိုက်၊စီဗုံးမှာနှုတ်ဆက်လိုက်နဲ့အချိန်ယူအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများ..အားလုံးကိုအမြဲအမှတ်ရကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ ရင်ထဲမှာရှိတာတွေအခမဲ့ရေးချခွင့်ရခဲ့လို့ blogger.com ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Posted by Dr. Nyan at 1:39 AM
ကိစ္စအ၀၀ အဆင်ပြေပါစေ ဆရာဥာဏ်ရေ့။ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင် ပညာတွေ ဝေပေးတဲ့အခါ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကြိုးစားသင်ယူလိုတဲ့ တပည့်များများ ရပါစေလို့ပါ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အခွင့်သာတဲ့အခါ စာတွေ ဆက်ရေးပါဦး။
အကိုရေ တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ လူသားတယောက် အဖြစ် ချီးကျူးပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ. တခုပဲ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ဘလော့လေးကိုတော့ Delete မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ ဒီအတိုင်းလေး ထားပေးထားပါ။ အကို အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ရေးပေါ့ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
I don't really know U, bro. we have never met before. But when we meet in blogger field, I can feel/see ur kind. Thanks for all and I believe that U will get all the good things what u want bro.
san win (kyaukpadaung).
I feel sorry that Dr. Nyan can not share the time for blogging. Anyway, please do not delete this blog which includes our feelings, and many useful articles. I am also wishing you that you can contribute the knowledge to our beloved country (not for the specificed group). Moreover, please let me insists you to write the blog whenever you have the spare time. I am waiting for that.
Last, but not the least, good luck for your research, health and best regards to your family.
အရမ်းကို ဗဟုသုတရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
မိသားစု အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ--
ခဏခဏ ပြန်လာကြည့်တယ်ဗျာ။ တကယ်ကို ပြန်မလာတော့ဘူးနော်။
ဦးဥာဏ် ချစ်သက်တမ်းတွေတောင် များနေပြီနော့် စီပုံးမတွေ့လို့ လာအော်တယ် ဦးဥာဏ်နဲ့တီဝါတို့ ဘ၀သက်ဆုံး ချစ်ခင်စွာ ဆက်လက် ပေါင်းသင်းရပါစေ.. ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်တခုကို လက်တွဲပြီး တည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်း)